Madaxtooyada Galmudug ee Cadaado oo xalay la isku rasaaseeyay
CADAADO, Soomaaliya - Xaalada magaalada Cadaado ee xarunta Baarlamaanka maamulka Galmudug, ayaa degan kadib iska hor-imaad xalay ku dhexmaray Madaxtooyada ciidamo kala taabacsan madaxa is-khilaafsan ee maamulkaasi.
Iska horimaadka ayaa ka dambeysay markii ciidamo daacad u ah Madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf, uuna hogaaminayo Wasiirka Maaliyadda Galmudug Saciid Shire, ay isku dayeen inay xoog ku galaan gudaha Madaxtooyada.
Ciidamada kale ee horey ugu sugnaa Madaxtooyadda islamarkaana taabacsan garabka kale ee uu horboodayo Madaxweyne ku xigeenka Galmudug, Maxamed Xaashi Carabey, ayaa kahor yimid kuwa wasiirka, taasi oo keentay dagaal inuu dhexmaro.
Is-rasaaseyn saacado socotay ayaa halkaasi ka dhacday, waxaana labada dhinac isku adeegsadeen Qoryaha daran-dooriga u dhaca iyo hubka fudud. Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dirirtu, inkastoo aan tirada rasmiga la ogeyn.
Ciidamadii uu watay Wasiirka Maaliyadda Galmudug, islamarkaana daacadda u ahaa Madaxweyne Xaaf ayaa ku guuleystay inay gudaha ay u galaan Madaxtooyadda, iyadoo xabadda ay joogsatay.
Dadka reer Cadaado ayaa saaka iyo ilaa hadda si wayn u hadal-hayay dagaalka ka dhacay Madaxtooyadda Cadaado, waxayna is-weydiinayaan sida uu xaalka noqon doono, maadaama khilaafka uu wali sii kordhayo.
Isku dhacaan ayaa wuxuu kusoo aadayaa iyadoo uu meel xun marayo khilaafka siyaasadeed ee salka ku haya awood qeysbiga maamulka Galmudug ee udhaxeeya hogaanka sarre ee Galmudug.
Madaxweynaha Galmudug ee Axmed Ducaale Geelle [Xaaf] iyo garabka isaga taageersan ayaa waxay ku sugan yihiin magaalada Dhuusamareeb, halka Garabka kale ee kasoo horjeeda ay ku shaqeynayaan Cadaado.
Xaaladda Galmudug ayaa ahayd mudooyinkii dambe mid kacsan, oo madaxdeeda ay is-khilaafsan yihiin, iyadoo Beesha Caalamka iyo Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ay ku baaqayaan inay xaaladda la dejiyo, islamarkaana la wada hadlo.
Tallaabadan ayaa ka dambeysay markii Khilaafka uu gaarey halkii ugu sareysay oo...